Ny mpamokatra rojom-by vita amin'ny vy, mpamatsy, mpamokatra - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, mpanelanelana, fitaovana elektrika
Precision Roller Chain, singa ary rohy mifandray
Ny rojom-pandrefesana vy dia matetika fomba tena mahomby sy mahomby amin'ny fampitana herinaratra mekanika, izay, mandritra ny sehatry ny fampiharana indostrialy, dia nanolo tanteraka ny karazana hafa rehetra rojo nampiasaina teo aloha. Ny sary eo ambany dia mampiseho singa ampahany amin'ny hyperlink ivelany sy amin'ny rohy tranokala anatiny misy rojo tsotra. Araka ny aseho an-tsary, ny rojom-pandrefesana vy vita amin'ny vy dia misy andian-dahatsoratry ny diary vita fifandraisana marina amin'ny tsirairay avy amin'ny alàlan'ny takelaka rohy manery ny tranokala. Ny fiterahana tsirairay dia misy tsipika fitondra-by sy kirihitra izay mihodina ny rojo rojo. Ny penina sy ny kirihitrala dia mihamafy mba hamelana ny articulation ambanin'ny tsindry avo kokoa, ary hiady amin'ny enta-mavesatra mitondra ny tsindry sy ny fiakarana ampitaina amin'ny alàlan'ny rojo vy. Ny rojo rehetra dia voasokajy mifanaraka amin'ny pitch (ny halavirana mikasika ny ivon-tsoratry ny tsimatra mitondra), ny savaivony sy ny sakany momba ny takelaka anatiny. Raha atambatra, ireo refy ireo dia antsoina hoe refy mihodina, satria izy ireo no manapaka ny endrika sy ny sakany miaraka amin'ireo nify mitsimoka.
Rohy miverina miverina mahazatra
Ireo singa rojo sy rohy mampifandray dia aseho fotsiny amin'ny karazany azo alefa. Azafady mba jereo ny pejy mety ho an'ny vokatra na serivisy ho an'ny faritrao sahaza ny rojo olona.
Vitan'izy ireo ny fivoriambe ampiasaina amin'ny habe sy karazana rojo. Ny singa dia misy takelaka anatiny roa voatsindry mankamin'ny kirihitrala mitondra ny roulons. (Ny rohy anatiny raha ampiasaina amin'ny rojo roimemy dia tsy misy rolika).